Xukuumadda Kheyrre Oo Qalad Dastuuri Ah Ku Dhacday – Gorfeeyaha Wararka Goor Walbo iyo Goob Kasto
Maanta waxaa wasaaradda arrimaha dibadda weerarray ciidan ka tirsan booliska Soomaaliya kuwaas oo doonayay in ay gacanta kusoo dhigaan wasiir kuxigeenka arrimaha dibadda Soomaaliya kaas oo xilligaas kusuganaa xaruntiisa shaqada.
Iska hor imaad aan sidaas usii buurneyn ayaa dhex maray ilaallada wasaaradda iyo ciidankii isku dayga gacan ku dhigidda ku waday wasiiirka.
Idaacadda BBC oo wareysatay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa u sheegay in ra’iisul wasaaraha soomaaliya uu ka damiintay wasiirka ciidankii booliska ee soo weerarray.
Ciidanka Booliska ayaa ku andacooday in ay wataan warqad ay maxkamadda ay saxiixday taas oo wasiirka lagu eedeynayo musuq maasuq baahsan.
Warqad ay maxkamad soo qortay sidee buu ra’iisul wasaare ku celin karaa? waa su’aasha dastuuriga ah ee mudan in la is weyddiiyo.
Haddii ay sax tahay warka wasiir Axmed Cawad ee uu Kheyrre kala diray ciidankii ku socday amarka maxkamadda waa qalad dastuuri ah, in laba waax oo kala baxsan in la isku qaso.
Doodaha siyaasiyiin uu kamid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayeey qeyb ka ahayd in la kala saaro hey’adaha dowliga, haddii aysan middaas dhicinna ay imaan karto in waaxyaha dowliga oo idil in hal meel looga taliyo.
Waa qalad waaxda garsoorka oo ka madax banaan waaxda fulinta uu madax ka tirsan fulinta uu amar siiyo gorsoorka, taas na waxa ay muujineysaa aqoondarrada nidaamka dowliga naga heysta iyo kelitalisnimada dowladda hadda jirta.